naka fepetra ny GIHTNB (Groupement Interprofessionnel de l’Hôtellerie et du Tourisme de Nosy-Be) amin` ny fampandrenesana ny kaonsily soisa monina sy miasa eto amintsika. Nandefa taratasy izy ireo ka manao antso avo mba hijerevan` ny kaonsily akaiky ny raharaha. Voalaza ao anatin` izany taratasy izany fa io teratany Soisa io dia efa voapanga nanolana ankizy vavy kely maro nandritra ny 15 taona. Raha tsy misy fepetra raisin` ity kaonsily ity, hoy ny GIHTNB dia azo raisina ho mpiray tsikombakomba amin` ity olon-dratsy ity noho ny fiarovana azy satria aty amin` ny firenena mahantra no mitranga ity raharaha ity. Marihana fa tamin` ny taona 2008, dia nisy fifanarahana nataon` ireo mpikambana eo anivon` ny GIHTNB mahakasika ny ady amin` ny fizahan-tany ara-nofo sy ny fampiroboroboana ny fizahan-tany eto Madagasikara. Noho izany, zo sy adidin` ny GIHTNB no misintona lakolosy amina tranga toy izao noho ny antony hijorony. Andrasana, araka izany, ny fanadihadiana sy ny fivoaran` ity raharaha ity.